Boka rekutsikisa Condé Nast rinoramba kutengeswa kwaro kuApple | Ndinobva mac
Condé Nast kuburitsa boka rinoramba zvinogona kutengeswa kuApple
Mumakore apfuura, isu takaona kuti iyo Cupertino-based kambani iri kuyedza sei kusiyanisa zvakanyanya sezvinobvira mabhizinesi maari anobatanidzwa. Iyo inhanho inonzwisisika, sezvo kutsamira kwe iPhone kune iyo kambani, uye iyo inomiririra inopfuura 60% yemari inowanikwa nekambani, inogona imwe nguva kutendeuka.
Masevhisi ari kuve chikamu chakakosha chemari yeApple, asi ichiri chimwe chinhu chingori chechetere patinozvifananidza nemari inowanikwa neyakaganhurwa nhare. Iyo AirPods, iyo Apple Watch, iyo HomePod ... zvakare zvimwe zvezvigadzirwa zvakatanga kuve yakakosha sosi yemari. Kuedza kuenderera kusiyanisa, kuitira kuti Zvirongwa zveApple zvaive zvekutenga Condé Nast yekutsikisa boka.
Sekureva kwepepanhau The Guardian, Apple inogona kuve nechido chakakosha kuwana iri boka rekutsikisa, kuitira kuyedza kusiyanisa bhizimusi ravo zvakanyanya kana zvichibvira, kunyangwe kana isina hukama nehunyanzvi sezvazviri nyaya iyi. Asi zvinogona kuita zvine musoro mushure mekutenga kwekupedzisira Kurume kweTexture application, iyo Spotify yemagazini, iyo mukutsinhana nemubhadharo wemwedzi wega we $ 9,99, inotibvumidza kuwana anopfuura mazana maviri emagazini emarudzi ese.
Condé Nast ndeimwe yemakambani makuru enhau muUnited States nekupfuura. Mimwe yemhando dzayo dzinozivikanwa kwazvo neGQ, Vogue, Vanity Fair, Iyo New Yorker, Ars Technica, Wired… Mumwedzi ichangopfuura zvinoita sekunge dambudziko iro nhepfenyuro dzechinyakare riri kuramba richienda rakatanga kuvakanganisa uye kugadzirisa zvichibva pakushambadzira chete hakunyatso kuitika, saka vangangosarudza kutora sisitimu yemwedzi yekunyorera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Condé Nast kuburitsa boka rinoramba zvinogona kutengeswa kuApple
Chok Idea tambo, yeApple Watch. Kukosha kwakanaka kwemari
Patent padenderedzwa Apple Watch yakachengetwa naApple